Ukhipha unyawo ephekela imindeni
WACABANGA ibhizinisi lokupheka eseyeke umsebenzi, uNkk Sibusisiwe Joyisa, odume ngoChef Mamatu, osephekela nomama abafuna ukukhipha unyawo emindenini yabo
ZANELE MTHETHWA | March 13, 2020
UTAKULA abesifazane abanqena ukupheka kodwa abafuna ukukhipha unyawo ngezibiliboco emakhaya, umpheki owayeka umsebenzi ngenxa yomendo.
UNkk Sibusisiwe Joyisa (42), odume ngoChef Mamatu, uthe kwamvusa emaqandeni ukuyekiswa umsebenzi ngumyeni wakhe, ecasulwa ukuthi akanaso isikhathi somndeni.
UNkk Joyisa oseshade iminyaka engu-17, uthe akukona ukuthi umyeni wakhe wayengathandi asebenze kodwa wayecikwa ukuthi akanaso isikhathi.
Uqale ngo-2009 ukuphekela imicimbi esenenkampani iMamatu’s Kitchen and Catering Services.
“Bengisebenza esitolo sezingubo ngingenaso isikhathi njengoba kusetshenzwa nangamaholidi nangempelasonto.
Umyeni wami ubengayizwa kahle le ndaba yokungabi naso isikhathi ngoba bekuthi uma ekhona ngempelasono, ngiphambane naye ngiye emsebenzini.”
Uthe wabona ukuthi kuzomenza abe nesizungu ukuhlala ekhaya, wacabanga ibhizinisi lokupheka. Ubevele enekhono lokushaya ibhodwe, obekwenza acelwe ukupheka emicimbini yemishado emakhaya.
Ngokubona likhula ikhono lokupheka, wavula indawo yokudayisa ukudla kwa-V eMlaza, athe amakhasimende abengawuvali umlomo.
Namanje amakhasimende akhe akawukhohlwa ufishi othosiwe abewudayisa namanje asafaka ama-oda. Ngenxa yokubiza kwendawo yokusebenzela, waphoqeleka ukuthi abuye ayosebenzela ekhaya. Uke waba namakilasi okufundisa ukupheka abasebenzi basezindlini.
“Ngabheka ngabona ukuthi omama abaningi ngisho beganile abanaso isikhathi. Obaba bayathanda ukuphekelwa kahle kodwa isikhathi asivumi. Uma kungaqeqesheka abasizi basezindlini bangalekelela omama uma bematasa ngomsebenzi,” kusho yena.
Yize la makilasi ayewenzela abasebenzi basezindlini, uthe kugcine sekufunda noma ngubani. Usamile ukufundisa la makilasi kodwa usedle ngokuphekela imindeni, ikakhulukazi ngamaSonto.
Uveze ukuthi uthola ama-oda omama abasuke befuna iSunday Meal kodwa bengenaso isikhathi sokuyipheka. Uthatha ama-oda bese ebashayela izitshulu abazifunayo.
“Ungamangala ukuthi bangakanani abantu abanqena ukupheka. Ngithola kakhulu ama-oda komama abashadile ngoba obaba bayathanda ukuphekelwa kahle. Isikhathi esiningi bafuna ukuphekelwa ngamaSonto kodwa ngiye ngifune kube umndeni, okungenani wabantu abalishumi,” kuchaza uNkk Joyisa.
Ngo-2015 uNkk Joyisa wafundela ukupheka eCapsicum Culinary Studio eMhlanga.
Uthe wayenzela ukuthi athole isicucu njengoba ubevele elishaya ibhodwe. Usefundise abanye njengoba esesebenza nabane abapheka naye uma eqashelwe umcimbi. Ubuye aqashe abazomwetela uma ezokwenza umcimbi omkhulu.